Yakob wiaa ne ho sɛ ɔrekɔ Kaanan (1-18)
Laban tiw Yakob kɔtoo no (19-35)
Yakob ne Laban yɛɛ apam (36-55)
31 Akyiri yi, Yakob tee sɛ Laban mma no rekeka sɛ: “Yakob afa yɛn papa nneɛma nyinaa; yɛn papa agyapade na ɔde anya ne ho.”+ 2 Afei nso, Yakob hui sɛ Laban ntew n’anim mma no sɛ kan no.+ 3 Afei Yehowa ka kyerɛɛ Yakob sɛ: “San kɔ w’agyanom asaase so ne w’abusuafo nkyɛn,+ na mɛkɔ so adi w’akyi.” 4 Ɛnna Yakob soma ma wɔkɔfrɛɛ Rahel ne Lea baa baabi a ɔde ne mmoa kɔ adidi no, 5 na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Mahu sɛ mo papa Laban ntew n’anim mma me sɛ kan no,+ nanso Onyankopɔn a me papa som no no di m’akyi.+ 6 Mo ara munim sɛ mede m’ahoɔden nyinaa asom mo papa.+ 7 Ná mo papa pɛ sɛ ɔfa kwan bi so sisi me, na wasesa m’akatua mpɛn du, nanso Onyankopɔn amma kwan amma wanyɛ me bɔne. 8 Sɛ ɔka sɛ, ‘Mede mmoa a wɔn ho yɛ damedame no betua wo ka’ a, mmoa no nyinaa wo wɔn a wɔn ho yɛ damedame; na sɛ ɔka sɛ, ‘Mede wɔn a wɔn ho yɛ nsensanee no na ebetua wo ka’ a, wɔn nyinaa wo wɔn a wɔn ho yɛ nsensanee.+ 9 Enti Onyankopɔn gyee mo papa nyɛmmoa maa me. 10 Afei eduu bere a ɛsɛ sɛ anini no foro abere no, mesoo dae hui sɛ mpapo a wɔreforo abere no, wɔn ho yɛ nsensanee, damedame, ne nsisiinsisii.+ 11 Ɛnna nokware Nyankopɔn no bɔfo frɛɛ me wɔ dae mu sɛ, ‘Yakob!’ na migyee so sɛ, ‘Mini.’ 12 Ɔtoaa so sɛ, ‘Mesrɛ wo, ma w’ani so na hwɛ, na wubehu sɛ mpapo a wɔreforo abere no, wɔn ho yɛ nsensanee, damedame, ne nsisiinsisii, efisɛ nea Laban reyɛ wo nyinaa, mahu.+ 13 Mene nokware Nyankopɔn a oyii ne ho adi kyerɛɛ wo wɔ Betel,+ baabi a wosraa adum bi na wokaa me ntam no.+ Afei sɔre fi ha san kɔ asaase a wɔwoo wo wɔ so no so.’”+ 14 Na Rahel ne Lea buae sɛ: “Agyapade bɛn bio na yɛwɔ wɔ yɛn papa fi? 15 Wanyɛ yɛn sɛ ahɔho antɔn yɛn anaa? Na ɛnyɛ yɛn ti sika na odidi ho?+ 16 Agyapade a Onyankopɔn agye afi yɛn papa hɔ nyinaa yɛ yɛne yɛn mma dea.+ Enti biribiara a Onyankopɔn aka akyerɛ wo no, yɛ.”+ 17 Afei Yakob sɔre de ne mma ne ne yerenom tenatenaa yoma so;+ 18 na ɔde ne nyɛmmoa ne agyapade a wabenya+ wɔ Padan-Aram nyinaa siim sɛ ɔrekɔ ne papa Isak nkyɛn wɔ Kaanan asaase so.+ 19 Saa bere no, na Laban rekotwitwa ne nguan ho nwi, na Rahel wiaa ne papa terafim ahoni*+ kɔe. 20 Afei nso, Yakob rekɔ no, wammɔ Aramni Laban amanneɛ; owiaa ne ho kɔe. 21 Na ɔde nea ɔwɔ nyinaa guan kotwaa Asubɔnten no.*+ Ɛnna ɔde n’ani kyerɛɛ Gilead+ mmepɔw mu. 22 Nnansa akyi no, wɔka kyerɛɛ Laban sɛ Yakob aguan. 23 Enti ɔfaa ne nuanom* kaa ne ho tiw no nnanson, na wɔkɔtoo no wɔ Gilead mmepɔw mu. 24 Ɛnna Onyankopɔn yii ne ho adi kyerɛɛ Aramni+ Laban wɔ dae mu,+ na ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Asɛm biara a wobɛka akyerɛ Yakob no, papa oo, bɔne oo, hwɛ yiye.”*+ 25 Laban kɔtoo Yakob sɛ wasi ne ntamadan wɔ bepɔw so, na Laban ne ne nuanom nso sii wɔn de wɔ Gilead mmepɔw mu. 26 Afei Laban ka kyerɛɛ Yakob sɛ: “Dɛn na woayɛ yi? Adɛn nti na woawia wo ho de me mma mmea aguan te sɛ nnipa a wɔatwe wɔn so sekan akyere wɔn kɔ? 27 Dɛn nti na wuwiaa wo ho kɔe a woankra me? Sɛ wobɔɔ me amanneɛ a, anka mede osebɔ ne nnwom ne mpintin ne sanku na ebegya wo kwan. 28 Woamma mamfew me nenanom* ne me mma mmea no ano. Woadi nkwaseasɛm. 29 Anka metumi ayɛ mo bɔne biara a mepɛ, nanso Onyankopɔn a wo papa som no no ne me kasae anadwo yi sɛ, ‘Asɛm biara a wobɛka akyerɛ Yakob no, papa oo, bɔne oo, hwɛ yiye.’+ 30 Sɛ w’ani agyina wo papa fi na wopɛ sɛ wokɔ a, dɛn nti na woawia m’anyame?”+ 31 Ɛnna Yakob buaa Laban sɛ: “Na misuro sɛ wubegye wo mma mmea no afi me nsam. 32 Obiara a wubehu w’anyame no wɔ ne nkyɛn no, ɛnsɛ sɛ ɔtena nkwa mu. Hwehwɛ me nneɛma mu wɔ yɛn nuanom* a wɔwɔ ha yi anim na sɛ wuhu a, fa kɔ.” Nanso na Yakob nnim sɛ Rahel na wawia. 33 Enti Laban kɔɔ Yakob ne Lea ne mmaawa baanu+ no nyinaa ntamadan mu, nanso wanhu. Afei ofi Lea ntamadan mu kɔɔ Rahel ntamadan mu. 34 Ná Rahel afa terafim ahoni no de ahyɛ mmea kotoku a wɔde to yoma so no mu, na saa bere no nyinaa na ɔte so. Enti Laban hwehwɛɛ ntamadan no mu baabiara nanso wanhu. 35 Afei Rahel ka kyerɛɛ ne papa sɛ: “Papa, mesrɛ wo mma wo bo mmfuw me; merentumi nsɔre efisɛ meyare mmea yare.”+ Enti ɔtɔɔ ne bo ase hwehwɛɛ baabiara, nanso wanhu terafim ahoni no.+ 36 Ɛnna Yakob bo fuwii, na n’ani beree Laban so, na Yakob bisaa no sɛ: “Bɔne bɛn na mayɛ, na mmara bɛn na mato a wudi m’akyi kirididi saa? 37 Wohwehwɛɛ me nneɛma mu yi, wo fi agyapade bɛn na wuhui? Sɛ wuhuu biribi a, fa bra me nuanom ne wo nuanom nyinaa anim na wommu yɛn baanu ntam atɛn. 38 Me ne wo atena mfe 20. Wo nguan anaa wo mpɔnkye no mu biara ampɔn,+ na manwe wo nguan no baako mpo. 39 Sɛ aboa bi kum wo mmoa no bi a,+ memfa no mmrɛ wo; m’ankasa mitua ka. Na sɛ obi wia bi anadwo oo, awia oo, wugye wɔ me nsam. 40 Ahohuru ba awia a, menam mu, awɔw ba anadwo nso a, menam mu, m’ani nkum na mada.+ 41 Mfe 20 ni a matena wo fi. Wo mma mmea baanu no nti, masom wo mfe 14, na mede mfe 6 nso ahwɛ wo mmoa, na woasesa m’akatua mpɛn du.+ 42 Sɛ Abraham Nyankopɔn a me papa Isak suro no+ no nni m’akyi a,+ anka nsapan na wode begya me kwan. Nanso Onyankopɔn ahu m’ahohia ne me brɛ, enti na ɔkaa w’anim nnɛra anadwo no.”+ 43 Afei Laban buaa Yakob sɛ: “Hwɛ, mmea yi yɛ me mma mmea, mmofra yi nso yɛ me dea, na mmoa yi nso wɔ me; biribiara a w’ani tua yi yɛ me ne me mma mmea dea. Ɛnnɛ dɛn na metumi ayɛ wɔn anaa mmofra a wɔawo wɔn yi? 44 Afei ma me ne wo nyɛ apam na ɛnyɛ adanse wɔ me ne wo ntam.” 45 Enti Yakob faa ɔbo na ɔde sii hɔ yɛɛ adum.+ 46 Ɛnna Yakob ka kyerɛɛ ne nuanom sɛ: “Montase abo mmra!” Ɛnna wɔkɔtasee abo bae, na wɔboaboaa ano yɛɛ no kuw. Afei wodidii wɔ abokuw no so. 47 Laban frɛɛ no Yega-Sahaduta,* na Yakob de, ɔfrɛɛ no Galeed.* 48 Afei Laban kae sɛ: “Ɛnnɛ, abokuw yi yɛ me ne wo ntam adanse.” Ɛno nti na ɔfrɛɛ no Galeed,+ 49 ne Ɔwɛn Aban, efisɛ ɔkae sɛ: “Sɛ yɛpaapae mu a, Yehowa ani nni me ne wo nyinaa akyi. 50 Sɛ woteetee me mma mmea yi anaa wokɔfa mmea foforo ka me mma yi ho, na sɛ onipa biara anni ho adanse mpo a, kae sɛ Onyankopɔn na ɔyɛ me ne wo ntam dansefo.” 51 Laban toaa so ka kyerɛɛ Yakob sɛ: “Mahyehyɛ abokuw yi, na mede adum yi asi me ne wo ntam. 52 Abokuw ne adum yi yɛ adanse+ sɛ merentra abo yi mmɛyɛ wo bɔne, na wo nso worentra abo ne adum yi mmɛyɛ me bɔne. 53 Abraham Nyankopɔn ne Nahor Nyankopɔn,+ wɔn agya Nyankopɔn, nni me ne wo ntam asɛm.” Na Yakob de Onyankopɔn a ne papa Isak suro no+ no din kaa ntam. 54 Ɛno akyi no, Yakob bɔɔ afɔre wɔ bepɔw no so, na ɔfrɛɛ ne nuanom sɛ wommedidi. Enti wodidii,* na wɔdaa bepɔw no so anadwo no. 55 Na Laban de, ɔsɔree ahemanakye na ofew ne nenanom*+ ne ne mma mmea no ano na ohyiraa wɔn.+ Ɛnna Laban sii kwan so san kɔɔ ne kurom.+
^ Anaa “n’abusuafo.”
^ Nt., “Hwɛ yiye na asɛm biara a wobɛka akyerɛ Yakob no, woamma papa annan bɔne.”
^ Anaa “yɛn abusuafo.”
^ Aram asɛmfua a ɛkyerɛ “Abokuw a Edi Adanse.”
^ Hebri asɛmfua a ɛkyerɛ “Abokuw a Edi Adanse.”
^ Nt., “wodii paanoo.”
^ Nt., “ne mma.”